व्रत सकिएपछि के खाने, के नखाने? चिकित्सकको यस्तो सुझाव « Lokpath
२०७६, १६ भाद्र सोमबार ११:२५
व्रत सकिएपछि के खाने, के नखाने? चिकित्सकको यस्तो सुझाव
प्रकाशित मिति : २०७६, १६ भाद्र सोमबार ११:२५
काठमाडौं । व्रत गर्नु स्वास्थ्यका लागि पनि फाईदाजनक छ । तर व्रत सकिएपछि मानिसहरु खान नहुने कुराहरु बढी खाएर पनि बिरामी पर्ने गरेका छन् । त्यसैले लोकपथले चिकित्सकको सल्लाहमा व्रतालुले के खाने के नखाने भनेर सोधेर टिप्सहरु जम्मा पारेको छ ।
दिनभरको व्रत सकिएपछि व्रतको दिन बेलुका अन्न खान नहुने भनिन्छ । तर फलफूल र झोलयुक्त पदार्थ भने खान धार्मिक छुट छ । व्रतको दिनमा प्रशस्त पानी, फलफूल र फलफुलको जुस खान सकिन्छ । व्रत बस्दा निराहार बस्दा राम्रो भएपनि स्वास्थ्यमा समस्या हुनेले यी झोलिलो कुरा खानुहोला दिनभरको भोको पेटले तत्काल कडा खाना पचाउन सक्दैन । यी खानेकुरा खान चिकित्सकले सुझाएका छन् ।
लामो व्रतपछि एकैपटक धेरै खानेकुरा खाँदा शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न भएर मानिस बेहोस हुन सक्छ । ठोस खाना मात्रै होइन, पानी पनि एक्कासि धेरै पिउनुहुँदैन । पहिले थोरै खाएर केही बेर आराम लिएपछि फेरि खानु उपयुक्त हुन्छ ।
-व्रतबस्दा चिल्लो–पिरो खानुहुदैन ।
-गर्भवती महिला व्रत नबसेको राम्रो हुन्छ । मुटु, कलेजो, फोक्सो , मृगौला ,मधुमेह, उच्च रक्तचापका समस्या भएकाले ब्रत बस्न हुदैन ।
-यसबाहेक स्वास्थ्यअवस्था राम्रा भएकाहरु महिनामा एक दुईपटक वा हप्तामा एक दिन व्रत बसेको राम्रो हुन्छ ।